Thermal Transfer Printer Printable PVC White Card, Thermal Transfer Printer Printable Plastic Blank Card, Thermal Transfer Printer Printable Plastic White Card, အပူလွှဲပြောင်းပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်ကဒ်, Thermal Transfer Printer Printable ID Card, Printable Thermal Transfer Plastic Card, Heat Transfer Printer Printable Plastic Card
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို Heat Transfer Printer Printable Plastic Card, Printable Thermal Transfer Plastic Card, Thermal Transfer Printer Printable ID Card, အပူလွှဲပြောင်းပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အပလတ်စတစ်ကဒ်, Thermal Transfer Printer Printable Plastic White Card, Thermal Transfer Printer Printable PVC White Card
optional RFID ချစ်ပ်: EM4102, TK4100, T5557, T5577, FM11RF08, Mifare 1k S50, Ultralight ကို C, ဂြိုလ်သား h3, Impinj M5, etc.
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: LF 125KHz / HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
အလုပ် mode ကို: R / W ကို
RFID ချစ်ပ် Eraser ကြိမ်: >100,000 ကြိမ်
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: LF / HF2~ 10cm, အထိလှိုင်းနှုန်းသည် UHF 1 မီတာ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 80 ℃ (-4℉ ~ + 176 ℉)
အရွယ်: CR80 85,5 × 54 × 0.84mm, သို့မဟုတ်ထုံးစံ
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: PVC, ပရင့်ထုတ်ရန်ဘုံပါးလွှာရုပ်ရှင်
အခြားအမှုလုပ်ငန်းစဉ်: သတ်မှတ်ထားသောနယ်စပ် Pre-print ထုတ်, ပုံစံ, ဂဏန်း, QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်လိုဂို
Card အားအဆင့်: 1 အဆင့်
ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ: ISO ကို 7811
Thermal Transfer Printer Printable PVC White Card in the production process to addalayer of printable plastic thin film, ကဒ်အရွယ်အစား 86 × 54mm, 0.25 ~ 1.0mm ၏စိတ်ကြိုက်ထူ), HITI များအတွက်သင့်လျော်သော, DATACARD, မြင်းကျား, တဖက်, EVOLIS, Magicad, JVC, Frgoo နှင့်အခြားကဒ်ပရင်တာ.
ကတ်များ RFID ချစ်ပ် encapsulated နိုင်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးကကတ် Solutions အတွက်သုံးနိုငျ, အဖွဲ့ဝင်ကတ်များ, access ကိုထိန်းချုပ်ကတ်များ, စက်ရုံဝန်ထမ်းကတ်များ, ကဒ် RFID ကတ်များအပေါငျးတို့သ features တွေရှိပါတယ်.
Card ကိုသံလိုက် Stripe ဟာ add နိုင်ပါတယ်, လည်းဆက်သွယ်ပါ IC Chip encapsulated နိုင်ပါတယ် (စမတ် IC Card ကို), ထိုကဲ့သို့သော Atmel AT24C32 အဖြစ်, AT24C512, SLE5528, ဒါကြောင့်အပေါ် SLE55542 နှင့်.
Card ကိုမျက်နှာပြင် pre-print ထုတ်သတ်မှတ်ထားသောနယ်စပ်နိုင်, ပုံစံ, နံပါတ်သို့မဟုတ်လိုဂို, သင့်ရဲ့ high-definition အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ.
ဤကတ် inkjet ပရင်တာနှင့်အတူ print ထုတ်လို့မရဘူး! If you need an inkjet printer-specific Printable Plastic Card, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: Inkjet Printer တိုက်ရိုက် Print ကို PVC Card ကို。
ကဒ်ထူအရ, 200 ~ 300pcs / box ရဲ့အရေအတွက်က.
Thermal transfer printable card printing effect pattern level rich, တောက်ပသော, ever-changing, small color difference, good reproducibility, suitable for mass production.
prev: ဘုံပရင်တာပရင့်ထုတ်ရန်အ PVC အဖြူရောင်ကဒ်
Inkjet Printer တိုက်ရိုက် Print ကို PVC အဖြူရောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အသံလိုက်မြှောင်ကဒ်, ပရင့်ထုတ်ရန်အ RFID Chip Blank ကကဒ်